DEG-DEG: Heshiiskii Kai Havertz Oo Soo Dhammaaday, Waraaqihii Qandaraaska Oo Miiska Saaran, Lampard Oo Xiddiga Taleefan Ku Wacay & Xogihii Ugu Dambeeyay - Gool24.Net
DEG-DEG: Heshiiskii Kai Havertz Oo Soo Dhammaaday, Waraaqihii Qandaraaska Oo Miiska Saaran, Lampard Oo Xiddiga Taleefan Ku Wacay & Xogihii Ugu Dambeeyay
Kooxda Chelsea ayaa u muuqata mid gacanta ku dhigtay bar-tilmaameedkeedii ugu weynaa ee suuqa kala iibsiga xagaagan iyagoo qarka u saaran isla markaana uu kaliya wakhti ka xigo inay rasmi u shaaciyaan saxeexa Kai Havertz oo Bayer Leverkusen ka tirsanaa.
Sida aanu goor dhawayd idinla soo wadaagnay, Chelsea iyo Bayer Leverkusen ayaa lagu balansanaa inay saacadaha soo socda dhinac u ridaan wada-xaajoodkan mudada dheer soo jiitamayay ee lagu daalay.
Chelsea iyo Leverkusen oo la filayay inay gudaha saacadahan heshiis gaadhaan ayaa isla hadda waxkasta isla meel dhigay sida uu sheegayo khabiirka suuqa kala iibsiga ahna suxufiga xogtiisa kalsoonida badan lagu qabo ee Fabrizio Romano.
Fabrizio ayaa sheegay in Chelsea ay 80 Milyan oo euro u qadimi doonto Bayer Leverkusen isla markaana ay 20 Milyan oo euro noqon doonaan lacago gunnooyin ah taas oo ka dhigan in heshiisku guud ahaan 100 Milyan oo euro noqonayo.
Saxafiga ree Talyaani ayaa intaas ku daraya in tababaraha Chelsea ee Frank Lampard uu taleefan kula sheekaystay Kai Havertz oo xiddig Chelsea ah noqonaya saacadaha amaba maalmaha soo socda.
Romano ayaa intaas ku daraya in waraaqaha heshiiska lagu saxeexayaa ay yihiin kuwo miiska saaran isla markaana uu Havertz qandaraas shan sano ah qalinka ugu duugi doono Blues isla marka ay labada kooxood dhinacyada kale ee heshiiska oo dhan dhammaystiraan.
Havertz ayaa noqon doona saxeexii saddexaad ee weyn ee ay Chelsea samayso suuqan maadaama oo ay kasoo horreeyeen dhaliyii RB Leipzig ee Timo Werner iyo kubad sameeyihii Ajax ee Hakim Ziyech.
Sidoo kale Blues oo duulaankii ugu weynaa suuqa ka fulinaya ayaa maalmaha soo socda lagu wadaa inay ku dhawaaqi doonaan saxeexyada kabtankii PSG ee Thiago Silva iyo daafaca bidix ee Leicester City ee Ben Chilwell.